Nepal aaja Archives - नेपाल आज
Nepal aaja	मुख्य समाचार
नेपाल अाजकाे युवा लक्षित ‘सफल क्यारियर निर्माणका लागि रणनीति’ कार्यक्रम प्रज्ञा भवनमा सुरु, तपाई छुट्नु भयो कि ?
Posted on: December 27, 2016December 27, 2016Posted by: Tirtha Khanal
कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा हलमा ‘strategy to buildasuccess career’ (सफल क्यारियर निर्माणका लागि रणनीति)विषयक विद्यार्थी युवा लक्षित कार्यक्रम गर्ने भएको सुरु भएको छ । विद्यार्थीहरुले success career कसरी बनाउन सक्छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिन कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नेपाल आजले निःशुल्क कार्यक्रम गर्न लागेको हो । उक्त कार्यक्रममा उपत्यकाका कलेजहरुबाट विद्यार्थीहरुको उत्सह […]
नेपाल आज डट कमको आध्यात्मिक कार्यक्रम सम्पन्न (फाेटाे फिचर)
भदाै – २५ । नेपाल आज डट कमले आर्ट अफ लाइफ विषयक आध्यामिक कार्यक्रम गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डप स्थित नेपल पर्यटन बोर्डको सभा हलमा तनावका कारण र मुक्तिका उपायका बारेमा एक दिने विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा हिन्दू विद्यापिठका प्रमुख डा. चिन्तामणी योगीले विशेष प्रवचन मन्तव्य दिएका थिए । उनले तनावको मुख्य कारण […]
साउन–८ । दुर्घटनाको कुनै निश्चित समय हुँदैन । जुनसुकैबेला पनि प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्ने भएको कारणले गर्दा हामी आफू सतर्क हुनुपर्छ । हरेक वर्ष चट्याङमा परेर धेरै मानिसहरुको ज्यान जाने गर्दछ तर हामी आफैँले पनि केहि सतर्कता अपनाए चट्याङबाट बच्न सकिन्छ । कसैमाथि चट्याङ लागेमा तुरुन्तै डाक्टर बोलाइहाल्नुपर्छ । धेरै मानिसमा चट्याङ लागेको मानिसलाई […]
Posted on: July 17, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । अनशनको आठौं दिनसम्म आइपुग्दा डा. केसीलाई टाउको र छाती दुख्ने, हातखुट्टाका मांसपेशी बाउडिने समस्या देखापरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार डा. केसीमा ब्लड सुगर न्युन देखिएको छ । ब्लडमा सुगरको मात्रा कम हुँदा बेहोस हुनसक्ने जोखिम हुन्छ । […]
बाढीपहिरोबाट देशभर छ जनाको मृत्यु, केही दिन निरन्तर वर्षात हुने
असार – १७ । बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट मुलुकका विभिन्न भागमा छजनाको मृत्यु हुनुका साथै धनजनको क्षति भएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार पहिरोबाट सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा तीन, ललितपुरको टौखेलस्थित पुष्पाञ्जली बोर्डिङ स्कुलको पर्खाल भत्किएर दुई र सर्लाहीमा खोलाले बगाएर एकजनाको मृत्यु भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुष्पाञ्जली स्कुलको पर्खाल भत्किएर अन्य २० […]
Posted on: June 18, 2016January 19, 2017Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
युद्धको पूर्वअभ्यासमा विप्लव माओवादी, कालोमोसो, तोडफोडदेखि नेपालबन्दसम्म
Posted on: June 8, 2016June 10, 2016Posted by: नेपाल आज
राजावादीलाई फकाउने, संसदवादीलाई तर्साउने नीति
‘बेइमानीको विरासत भएका खनालले ओलीलाई प्रश्न उठाउन सुहाउंछ ?’
Posted on: June 2, 2016September 11, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
जेठ-२०, राजनीति इमानमा चल्छ । इमानमा नचलेकैले नेपालको राजनीति प्रदुषित छ । निष्कलंकित भनिएका सुशील कोइरालाले जीवनको उर्तराद्धमा बेइमानीको तिलक लगाए । भद्र सहमति भएकै थियो । तर, उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएनन् । बरु मैदानमा आफैं उभिए । सम्भवतः सादगी जीवनमा सो घटनाले लगाएको धब्बा सुशीलका लागि निकै महङ्गो रह्यो […]
पसिनाको दुर्गन्धले चिन्तित हुनुहुन्छ ? यसाे गर्दा राम्राे
काखी र खुट्टा गन्ह्याउने समस्या कारण गर्मीयाम अधिकांशलाई अभिशापजस्तै बन्छ । गर्मी महिनामा अत्याधिक पसिना आउने समस्याले सबैजसो मानिसलाई सताउँछ । दैनिक नुहाइ–धुवाइ गरेर कपडा फेर्दा पनि पसिनाको दुर्गन्धबाट बच्न सकिरहेका हुँदैनन् । पसिनाले शरीरमा छाड्ने दुर्गन्ध हटाउन कतिपयलाई पर्फयुमले पनि सहयोग पुर्याएको पाइन्न । तर, केही यस्ता घरेलु उपाय अपनाउन थाल्यो भने यो […]
निःशुल्क डायलाइसिस सुविधा पाएकाले प्रधानमन्त्रीलार्इ अाभार प्रकट
१९ जेठ । मिर्गौला पीडितले डायलाइसिस उपचार निःशुल्क गराइदिएकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आज धन्यवाद दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मिर्गौला रोगीको डायलाइसिस निःशुल्क बनाएको खुसियालीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आभार प्रकट गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपचारका सम्भावना हुँदाहुँदै कसैले पनि उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् भन्ने आफ्नो चाहना […]
पत्रकारले गलत गरे मृत्यु दण्ड दिने
फिलिपिन्सका राष्ट्रपति राेड्रगाे डुट्रेटले हालै एक विवाधास्पद अभिव्यक्ति दिदै पत्रकारलार्इ चेतावनी दिएका छन् । टाइम डट कमले बताए अनुसार पत्रकारले गलत काम गरे भने मृत्यु दण्ड हुने छ । पत्रकारहरुकाे लागि फिलिपिन्स विश्वकै सबैभन्दा खतरा देश मानिन्छ । हालैकाे एक तथ्या‌ंक अनुसार सन् १९९२ यता ७५ जना पत्रकार मारिसकेका छन् । उक्त तथ्यांक एउटा गैर […]
भूकम्प पीडित आठ हजार बालबालिकालाई सहयोग
Posted on: June 1, 2016June 1, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले हालसम्म भूकम्प पीडित आठ हजार १७७ बालबालिकालाई राहत सहयोग वितरण गरेको छ । चालु आवको आठ महिनामा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाका छ हजार ३७५ बालबालिकालाई रू पाँच हजारको दरले र एक हजार ८०२ जनालाई रू चार हजारको दरले राहत वितरण गरिएको हो । भूकम्पबाट प्रभावित बालबालिकाको सङ्ख्या करिब ४० हजार […]
भारतिय सेनाको हतियार डिपोमा आगलागि १७ को मृत्यु
Posted on: May 31, 2016September 11, 2016Posted by: नेपाल आज
जेठ १८ । भारतको महाराष्ट्र राज्यस्थित पुलगाउँमा रहेको भारतीय सेनाको केन्द्रिय हातहतियार डिपोमा आगलागी हुँदा दुईजना सैन्य अधिकृतसहित कम्तिमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यहाँका तैनाथ रहेका एक सैन्य अधिकृतका अनुसार आगलागीमा परी घाइते भएका मध्ये धेरैको अवस्था चिन्ताजनक छ । मुख्य आगलागी भएको स्थानको आगो नियन्त्रणमा आइसकेको र अहिले अवस्था सामान्य रहेको छ, उनले […]